Mihoatra noho ny fanatsarana ny motera fikarohana | Martech Zone
Mihoatra ny fanatsarana ny motera fikarohana
Alakamisy, Aprily 29, 2010 Alatsinainy Aprily 11, 2016 Douglas Karr
Omaly, nanao fiofanana momba ny fanatsarana ny motera fikarohana aho ary nanasa mpamorona, mpanoratra mpanoratra, mpanoratra ary koa mpifaninana hanatrika ny fiofanana. Fonenana feno izany ary nandeha soa aman-tsara.
Ny fametrahana eo amin'ny motera fikarohana dia tsy ny valiny foana - ny orinasa dia tsy maintsy manana atiny mahomby, tranokala tsara ary lalana hahafahan'izy ireo mifandray amin'ny orinasa.
Mieritreritra ny tenako ho toy ny manam-pahaizana momba ny fanatsarana motera fikarohana aho. Ho an'ny ankamaroan'ny orinasa, azoko atao ny manatsara ny tranonkalany na ny sehatra anaovany azy ireo, manome azy ireo fampahalalana momba ny fomba fanaovana fikarohana teny lakile, ary mampiseho azy ireo ny fomba fampisehoana an'io atiny io amin'ny fomba iray hahazoana antoka fa ho hita ao amin'ny toerana tian'izy ireo izy ireo.
Rehefa mijery ao anaty ny fikambanananao sy ny ezaka ataon'ny Search Engine Optimization ianao, dia misy teboka iray tsy hiverenana ho anao koa. Tsy raharahako izay mamaky amin'ny Internet momba ny SEO, izay inoanao, sy izay heverinao ho fantatrao… tsy manana izay ilaina ianao mba hamindrana ny fanjaitra aorian'ny fotoana iray. Maro amin'ireo mpanjifa niara-niasa tamiko no manana ny fahaizan'ny SEO manana laharam-pahamehana amin'ny teny lakolosy vitsivitsy - fa aza avadika amin'ny fomba mahomby ireo vinavina izay nahatratra azy ireo tamin'ny tranokalany.
Raha tsy manana loharanom-bola hampiasa orinasa matanjaka ianao dia atsaharo ny fikorontanana. Misy safidy maro hafa amin'ny laharana amin'ny teny filamatra avo lenta sy mifaninana:
Azonao atao ny mikendry ny teny lava-lava sy teny fanalahidy mifandraika kokoa izay manatsara ny tahan'ny fiovam-ponao satria mitarika ho amin'ny habetsaky ny fanantenanao mahay kokoa izany.
Azonao atao ny manatsara ny famolavolana ny tranokalanao hiseho ho toy ny fikambanana matihanina sy matoky kokoa, manatsara ny antso-to-hetsika ary ny pejy fandraisana - manatsara ny tahan'ny fiovam-po.
Azonao atao ny manova ny atiny sy manatanteraka fanandramana maro karazana, fitsapana a / b / n ary fizahan-toetra hanatsarana ny tahan'ny fiovam-po amin'ireo fanantenana miala amin'ny tranokalanao.
Azonao atao ny manatsara ny lohatenin'ny pejinao sy ny famaritana meta mba hanatsarana ny maha-zava-dehibe ny pejin'ny valin'ny motera fikarohana (SERP) mba hahafahan'ny mpampiasa motera fikarohana maro kokoa manindry ny fidiranao amin'ny pejy valin'ny valiny. Zahao ny tahan'ny click-through ao amin'ny Google Webmaster Central.
Azonao atao ny mampiasa amin'ny fomba mahomby ny media sosialy sy ny marketing amin'ny mailaka hifaneraserana, hampiasana indray ary hampisondrotra ny mpanjifanao - hanatsara ny valin'ny asa rehetra.
Ny motera fikarohana dia nanjary mpanelanelana lehibe ho an'ireo orinasa mampiasa paikadim-barotra miditra… saingy tsy midika izany fa tokony hampiasa ny loharanonao rehetra ianao mba hanandramana manapotsitra ny ounce farany rehetra ao. Mila manao ezaka ampy ianao hanarahana fomba fanao tsara indrindra, saingy mandany ny fotoana ampianao tsara. Raha ny laharam-pahamehana ho an'ny teny fanalahidy tena mifaninana no hany safidinao na manana fihenam-bidy betsaka indrindra, mampanjaria vola a orinasam-panamafisana ny motera fikarohana toy ny antsika, DK New Media. Raha tsy eo ny fiverenana amin'ny fampiasam-bola, mifantoha amin'ireo paikady hafa mety hampitombo ny vokatrao amin'ny orinasa ankapobeny.
Tags: Content Marketingmailaka Marketingteny fanalahidyteny lakile lava rambofamaritana metalohatenin'ny pejyhaino aman-jery sosialyMalagasy famolavolana
Inona no atao hoe consultant amin'ny marketing amin'ny mailaka ary mila iray aho?
Mety aminao ve ny drafitra fandraharahana ara-barotra?
Apr 29, 2010 ao amin'ny 12: PM PM
Enga anie ny sasany amin'ireo mpandrindra tranonkala izay nanatrika dia nianatra zavatra vitsivitsy. Tsy misy toa ny mihazakazaka mankamin'ny tranonkala izay mitaky isa 5 ho an'ny mpanjifa izay tsy misy lohateny pejy na famaritana meta natao tsara, na manana URL an-trano marobe. Ary zavatra iray hafa… olona mpanangana tranokala, aza manangana na mamerina tranokala raha tsy manao fikarohana teny lakile na misy olona manao azy. Olana amin'ny fahazotoana izany.